Leds Hack, dami nalalka ku shaqeeya Android | Androidsis
xikmad | | Codsiyada Android, Reviews
Maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamijkan fudud ee laga heli karo suuqa iyo inaan isku daro saameynta la bixiyay, ee yaree iftiinka Android-kayga saacadaha habeenkii iyo in la qadariyo marka la isticmaalayo taleefanka marka nalka nooc ka mid ahi aanu ka jirin.
Mabda 'abka waa fududahay iyo sidoo kale waxtar. Demi badhanka taleefankaaga kumbuyuutarka ee Android. Waxaa jira waxyaabo badan oo suuqa yaal, laakiin waa tan kaliya ee aan i siinin wax dhibaato ah oo ku saabsan ROM-yada la kariyey waxayna iga shaqeysay astaamaheyga HTC.
Fursadaha barnaamijka waa waxa aad qiyaasi karto, nal iyo nal shidan Waana taas. Sida aad u isticmaasho, horeyba way u timid si waafaqsan. Barnaamijkan u baahan marin xidid ilaa terminal-ka. Xulashooyinka yar ee codsigani heli karo, waxaan ka helnay markii aan riixaynay menu, daaqada weyn:
Dabcan, xulashada terminal ee arjiga inuu shaqeeyo.
Sii shuruudo ay kaligeed ku bilaabi karto oo ay dami karto laydhadhka.
Maxaan dooneynaa inaan damino: ogeysiinta ayaa hogaamineysa, keypad la hogaaminayo, ama trackball.
Haddii aan rabno inay ka soo muuqato aagga ogeysiinta marka dalabku shaqeynayo.
Habka joogtada ah (iska ilaali midkaan).
Ka dibna gardarrada uu barnaamijku ku dhaqmayo (aan tagno, oo aan la socono habka joogtada ah, si had iyo jeer ay u shaqeyso xitaa haddii ay jiraan khaladaad). Habkaani ma weerarayo xarunta, mana qaadanayo ul iyo shaashadda. Waxay mar horeba ka digayaan inay isticmaasho batteri badan.
Waxay leedahay ikhtiyaarka aad loo isticmaalay ee ku dar aalad Miiskayaga si loo fududeeyo shidida / daminta qalabkan (oo aniga ii shaqeynayn). Waxaan u maleynayaa in dhibaatadu ay ku jirto rukhsadaha ruqsadda, in aaladda widget aysan weydiisan iyaga, in kasta oo aanan si fiican u baarin, maxaa yeelay toobiye, ayaa arjiga lagu furaa labada badhan si loo shido oo loo damiyo, iyo aaladda widget uma muuqato aniga loo baahan yahay.
Waxaan u istcimaalaa arjigaan marki aan aqriyo RSS sariirta. Dabcan (in kastoo aan la dareemi karin) haddii aad rabto inaad isticmaasho inta lagu jiro maalinta sidoo kale, si nalku uusan u jeedsan, oo u cunin batteri yar (waa LEDs, waxna ma cunaan waxna kama jiraan) sidoo kale waad awoodaa samee. Waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa si aad u demiso laydhka markaad daawato fiidiyoow.
Waxaan kaaga tegayaa shaashadda shaashadda oo aad ii sheegeysaa kuwa idinka mid ah ee doonaya inay tijaabiyaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Leds Hack, dami nalalka ku yaal Android-kaaga
Waxaan xiiseynayaa barnaamijka, sideen ku heli karaa? Salaan!
Waan rabaa, ii sheeg xagee ka soo dagsadaa